देशकाल , किशोर नेपाल
वैद्यराजले दिउँसो भनेका थिए, ल, व्लडप्रेसर त नर्मल नै छ । औषधि खाइ हाल्नु हुँदैन व्लडप्रेसरको । त्यसपछि दिनको चारपटक चीसो पानीसंग अनुपात मिलाएर खान सितोपलादी दिएका थिए तीन दिनका लागि । बा–आमाको पालादेखिका खानदानी वैद्य अझैपनि असनको तिलङ्गा घर अगाडी रहेको आफनै पसलमा औषधिका प्यांगहरुले घेरिएर वस्छन । उनले दिने औषधि भनेको सितोपलादी, कर्पूरादि गोली, लवणभाष्कर चूर्ण र हिंग गोली हो । उनको ठहर थियो, अहिलेको मौसममा निंद्रा दिउँसो लाग्ने गर्दछ । राति त मानिसले कति कुराको जोखना हेर्नु पर्दछ । कहाँ सुत्न पाउँछ र ?निंद्रा लाग्नु दुइ नम्वर प्रदेशको चुनावजस्तै दुःस्वप्न सावित भएको छ,आफैंमा ।कति दिन होइन कति महिनादेखि । सितोपलादीले मिठाइको काम गरेको छ । निंद्राको आकर्षण छ चुनावमा । मानिसहरु भोट खसाल्न जमजमाएकाछन । चुनावलाई भने औंशीपूर्णे लागेको छ । हुन्छ । हुँदैन । हुन्छ । हुँदैन । चुनावको सिलसिलामा कोठाको भित्तामा पोतिएको हरियो रंगको प्रतिक्रियामा रातो रंग पोतिइ सकेकोछ । हरियो र रातो रंगको प्रतिक्रियामा गेरु रंगको प्रभाव पनि जमिसकेकोछ । चुनाव हुनै लागेपनि निंद्रा कसैलाई लागेको छैन। निंद्राका लागि मानिसका केही हजार रुपैयाँ अनावश्यक खर्च मात्रै भयो ।धेरै विरामी परे । शरीरमा कुनै त्यस्तो विकार नभएपनि निंद्रा नलाग्ने रोग चारैतिर फैलियो । निंद्रा नलाग्नुका कारणहरु भेटिएका छैनन । गर्मीले निंद्रा नलागेको भनौं, मौसमका हिसावले काठमाडौ शहरको वातावरणमा त्यति अशान्ति पनि छैन । शहर परिपक्व छ, म्याचोर्ड । राति घर बाहिर, आँगनको चकमन्नबाट निकै टाढा, कुकुरहरु कतै जोरले भुक्दै गरेका हुन्छन,कतै उनीहरुको भुकाइ मन्द हुन्छ । मधेशको कुनै टाढाको गाउँमा बजेको ढोलको एकोहोरो आवाज जस्तो । मधेशमा अर्थात गंगासागरको किनारामा केही बर्षदेखि शुरुभएको गंगासागरको सफाइ र गंगाजीको आरतीको सम्झना हुन्छ । मधेशको मध्यविन्दू जनकपुरबाट शुरु भएको यो अभियान जारी छ । गंगासागर निर्मल भएको देखिन्छ । सागरको दक्षिणमा रहेको श्मसानघाटको एउटा पाटोमा प्रेम पार्कको निर्माणले परिवर्तनलाई टडकारो देखाएकोछ । एकातिर मरेको मानिस डढदै गरेको छ । अर्कोतिर तन्नेरीहरु सृष्टि र सृजनाको प्लानिंग गर्न लागेका छन । उतापट्टि शोक छ, यतापट्टि कामोद्दीपक छ वातावरण । यति परिवर्तनको लागि भिडेका छन युवाहरु । भिडनेहरु कसैले पनि जितेका छैनन । भिडेर रामाशीषले मात्र जितेको छ । उसको बिचार छ – परिवर्तन एक्लो मानिसले ल्याउने होइन । एक्लो मानिसले आफनो विचारलाई कति विस्तार दिन सक्दछ ? त्यही हो परिवर्तन र परिचालनको परीक्षा । अहिले त राम्रो छ । राम्रो फैलिदैंछ । हिजो गंगासागर तलाउको छेउमा दिसा गर्नहुन्न भन्ने कोही थिएन । आज पनि कोही छैन । मानिसले वुझेको छ कहाँ दिसागर्नु हुँदैन ।नैतिक रुपले भन्नुपर्दा कुनै पनि शहर खराब हुँदैन । खराब हुने भए असल शव्दको प्रयोग नै किन हुने थियो ? शहर परिभाषामा ठीक हुन्छ । किनभने, शहरका बनियाँहरुले क्यालकुलेटरमा गर्छन आफनो हिसाव । धर्म र पाप, भ्रम र यथार्थ, इशा मसीह र पैगम्बर मोहम्मद, महावीर र वुध्द, विष्णु र शिव । क्यालकुलेटरमा सबै अटाउँछन । यति हो कि त्यो क्यालकुलेटरको क्षमता कति डिजिटको छ । यतिबेला मूल सडकको त्यो कफी स्टोर वन्द भै सकेको हुनुपर्दछ । यो मध्यरातमा कफी पिउन को जाला र त्यहाँ ?ठमेलतिर भए पो मध्यरातको पनि व्यापारिक महत्व हुन्छ । तेस्रो लिंगीहरुको जात्राको वहानामा विपरित लिंगीहरु अभिशारको खोजीमा हुन्छन । अभिशार सिनेमाको ट्रेलर जस्तै हो । स्पन्दन सिनेमामा अमोल पालेकरको भूमिका भ्रूण व्यापारीको भन्दा अलिकति पनि कम थिएन । तर, त्यो सिनेमा कतिले हेरे ?कभरमा जे हुन्छ त्यो दमदार हुन्छ । त्यो दशवटा ट्विट लेखेर लेखक भएजस्तो होइन । न त कफीमा मिसाएको रमको वास्ना जस्तो मधुर नै हो । काठमाडौं साँच्चै रमाइलो शहर हो । यो शहरको मौसम रम र कफीको व्लेण्डका लागि एकदमै ठीक छ । सहज छ । यो कफी स्टोर भएको एरिया भर्खर विकसित भएको, भर्खर खुलेको, यस्तो एरिया हो जहाँबाट केही बर्ष अगाडि मात्रै भूतहरु विस्थापित भएका थिए । घरका मानिसहरु सूर्य अस्ताएपछि बाँकी रहेको उज्यालोमा भूत मन्सिने गर्दथे । एउटा भूत यस्तो थियो जसलाई सवैले देखेका थिए ।उ मयलपोश–सुरुवाल र नर्थ फेसको ज्याकेटमा निकै हराभरा देखिन्थ्यो । सडकमा कुनै तरुनी देख्यो भने उ आफनो हातमा रहेको रातो गुलाफको पूmल सुँध्थ्यो र विस्तारै मस्किन्थ्यो । अलिकति हिसी पारेर हाँस्थ्यो । रुपको त कुरै भएन । भूत निकै सुन्दर थियो । राजकुमार जस्तो । अर्की भूतिनी थिइ, जो कम्मरभन्दा तल कालो रंगको स्कटिंगले छोपिएकी हुन्थी । भूतको लागि के जाडो, के गर्मी । मौसम जुनसुकै होस उ कहिले सेतो स्लीभलेसमा ढाकाको शल र कहिले चहकिलो पुलओभरमा देखिन्थी ।चहकिलो कपडा उसलाई खूवै सुहाउँथ्यो । उनीहरु दुबै लोग्ने–स्वास्नी थिए । यहाँबाट विस्थापित हुनुभन्दा पहिलेसम्म मानिसका जोडा–जोडी । त्यसपछि भूतका भाले–पोथी ।तिथी र पर्वहरुमा सांसारिक मानिसहरुले दुना वा वोहोतामा मन्छिएको दाल चामल र वेसार उनीहरु खाँदैनथे । के खान्थे त ? बुबु दिदीलाई भूतको प्रसंग थाह थियो । जीवनको लामो हिस्सा दरवारमा विताएकी उनले जानेकी थिइन कसरी हुन्छ भूतको सृष्टि । उनी यो रहस्य कसैलाई वताउन तयार थिइनन । तर के खान्थे त ? प्रश्नको जवाफमा उनी भन्थिन, ।।।शत्रु फेला परेभने त्यसको छातीमा प्वाल पारेर तनतनीपिउँछन तातो रगत ।’ बुबु दिदी बोकासो जस्तो सुनिन्थिन ।बुबु दिदीको कुरा सुनेको दिन कोेही पनि अवेरसम्म घर वाहिर वस्दैनथ्यो । भूतको आतंक पछि सम्म जीवित थियो । अहिले पनि कायम छ त्यो आतंक । कमल पोखरीबाट गौशालासम्म आउँदा त्यो बाटोे हिंडने बटुवा भकुण्डे भूतसंग लटपटिदै घर आइ पुगेको कथा सुनाउने गर्दछ । अहिले पनि । हिजो साँझ कफी स्टोरमा आएकी थिइ सुनयना । लिभाइज जीन्समा ठाँटिएर । योे केटी विहान विहान विदेशी कुकुरका दुइवटा छाउरालाई तान्दै र घिसार्दै प्रभातकालीन ।।।वाक’मा आउँछे । उ प्रभातकालीन वाकमा आएकी हो कि आफना कुकुरहरुको पेटसडक किनारामा ।।।हलुका’ तुल्याउनआएकी हो ? यतापट्टी कसैले ध्यान दिएका छैनन ।कुकुरहरु हलुका हुन्जेल सुनयना देखेको नदेख्यै बाटोमा ठिंग उभिन्छे । शहर छिटै दिसामुक्त क्षेत्र घोषित हुँदैछ भन्ने थाह छैन सुनयनालाई । उ अमेरिकामा पढेर आएकी हो । त्यहाँको समाज देखेकी पनि हो । कुकुर पाल्नेहरु कुकुरसंगै मर्निङवाकमा जाँदा हातमा प्लाष्टिकका स–साना झोला बोकेर हिंडेको पनि देखेकी हो । देख्दैमा के हुन्छ र ?उसका दुइवटा विदेशी कुकुरका छाउराका लागि सडक सुरम्य पाइखाना हो ।सुनयनाको घरको हरेक कोठामा सुरम्य वाथरुम छन । साँच्चै सुरम्य । सुनयनाले आफनो कोठाको वाथरुममा टम हङ्क्सको ठूलो व्ल्याक एण्ड व्हाइट पोष्टर टांसेकी छ । त्यसपछि भित्तामा टांगिएको क्याविनेटमा कस्मेटिक्स, स्याम्पु, कण्डिशनर, ट्वाइलेटरिज र पर्फ्युमको चांग छ । उसको त वाथरुममा पनि वाइफाईको राउटर छ । कमोडमा वसेको वेलामा सुनयनाको दिमागमा विचारको ओइरो लाग्दछ । एउटा सानो हलुका म्याकबुक एयर वाथरुमको म्यागजिन र्याकसंगै राखेकी छ उसले । विचारको स्पूmरण भयो भने उ त्यहीं सक्रिय हुन्छे । वाथरुम के छ, आफैंमा मिनी मार्ट जस्तोछ ।दिमागमा चक्कर आइ रहेको थियो केही दिनदेखि । फ्री वाइफाई, वाइफाई फ्री । कुन शुध्द हो ? यति थाह पाउन कि यी दुवै अशुध्द हुन, धेरै दुःस्वप्नको सामनागर्नु पर्यो । पहिलो त वाइफाई फ्री पाइने वस्तु नै होइन । यसैको भरमा कम्पनीहरुलाई सरकारले अरवौं कर तिराउँछर सरकारका कर्मचारीहरु अरवौं कर छलाउन मद्दत गर्दछन । अर्काको सहयोगगर्नु धर्म हो । गीताले यसै भनेको छ । गीताभन्दा सत्य केही बाँकी छ समाजमा भने यही एउटा सत्य बाँकी छ । कर तिरिएको, कर छलिएको,कर चुक्ता न भै सकेको तीनवटै अवस्था सत्य हो । यो सत्य सामाजिक संजालमा हजारौं पटक दोहोरिएको हुन्छ । एउटा सत्यले अर्को सत्यलाई लखेटी रहेको हुन्छ । त्यसो त कफी स्टोरमा आएकी सुनयना पनि एकदमै सग्लो सत्य हो । उ राम्री छ । तर, उसकोसत्य विनसित्ति सबैको आँखामा विझाउँछ । सवै आँखाहरु उसलाई मात्र हेरिरहेका हुन्छनट्वालट्वाल्ती । उ त कसैलाई हेर्दै हेर्दिन । साँझमात्र होइन, विहानपनि, सुनयना ठाँटिएर आउँछे कफी स्टोरमा । उ आफना कुकुरहरुलाई कफी स्टोरको ढोका वाहिरको स्मोकिंग टेवलमा अल्झाइ दिन्छे । दुबै कुकुरलाई दुइ दुइवटा अण्डाको ब्रेकफाष्ट अर्डर दिन्छे । आफनो लागि डेनिश र क्याफे ल्याट्टे मंगाउछे । एयरफोन दुबै कानका प्वालमा ठूँस्छे । उसका कुकुरहरु हलुका भै रहेका हुन्छन । स्टोरका ठिटाहरु सुनयनासंग अदव राख्दछन । उनीहरु उसंग केही वोल्न होइन उसको नजीक पर्न पनि सक्दैनन । सुनयनाको सौन्दर्यको महकको सामनागर्नु चानचुने कुरा होइन । एक त, सुनयनाको कानमा एयरफोन छ । उ एक शव्दपनि सुन्न सक्दिन । उ त व्लूम व्लूम गीत सुनी रहेकी छ । अर्को, कुकुरले कसुर गरेवापत सुनयनाले केटाहरुलाइ राम्रो टिप दिन्छे । शहर यस्तै छ । कुकुरहरु कसुर गर्छन । केटाहरु टिप पाउँछन । यसलाई शहरले आत्मसम्मान गुमाएको भन्न मिल्दैन । सम्मान गुमाएको पनि होइन । शहर बाक्लिएको हो । बग्रेल्ती खुलेका छन कफी शप र स्टोरहरु ।हामी नेपालीको टेष्ट छ । जे भएपनि टेष्ट छ । हिजो एउटा केटो हेजलनट ल्याट्टे मंगाउँदै थियो । उसकी फियाँसी आइसक्रिम–ब्राउनीमा थिइ । एक घण्टा यहाँ विताएर उनीहरु शिल्पी थेटरमा ।।।अनि देउराली रुन्छ’ हेर्न जाने वाला थिए । त्यो थेटरपनि पहिले एउटा भूतको अखडा थियो । मानिसको वस्ती बाक्लिदैं गएपछि मात्रै भूतहरु त्यहाँबाट विस्थापित भएका हुन । उनीहरु कफी र आइसक्रिमसंग छिल्लिदै थिए । देउराली रुन थाली सकेको थियो । उनीहरु रतिक्रिडाको मनस्थितिमा थिए । सुरक्षित ठाउँको खोजीमा । दुर्गाले भोलिपल्ट विहान मलाइ वतायो, ती त साँढे नौ बजेसम्म कफी स्टोरमा नै थिए ।कफी र देउरालीको कम्बो कसैगरि मिलेको थिएन । मानिसहरु थेटरमा ओइरिए भन्दैमा नाटक चलेको मान्न सकिदैन । थेटरमा आउनु भनेको स्टेटस हो । हैसियत कमाउनु हो । थेटर आफैमा स्टेटस हो । सलमान रस्दी र अरुन्धती रायका पुस्तकहरु वैठकमा सजाएर राखे जत्तिकै हो । कसैले भन्न सक्दछ होइन ?धेरै मानिसको स्वादको सन्तुलन आइसक्रिम र ब्राउनी कम्बोले विगारी दिएको थियो । ।।।ए पूmल चुँडेर लाने हो, यहाँ माझी रोएको देख्यौ कि ?’ माझी रोएको देख्ने पूmर्सद कसैलाई किन होस ?जसको वगैंचाको पूmल चुँडिएको छ उ नरोएर गरोस पनि के र? कुनै समयको त्यो टिपटप नाटकमा त्यो समयको प्रतिविम्वन छैन । नयाँ समयमा देउरालीहरु भत्किएका छन । त्यो देउरालीमा अहिले गोर्खालीहरु खुकुरी नचाउँदैछन । बंगालीहरु आफनो भाषाको विस्तारका लागि त्यहाँ ।।।अहिंसात्मक’आक्रमण गर्दैछन । सुवास घिसिङले त्यतिवेला सिकाएका थिए ः नानी तिमी यो भन, नानी तिमी यो भन । हामी बंगालमा वस्दैना,ै बंगाल हाम्रो चिहान हो ।’ अहिले त्यहाँका नेताहरुले नानीहरुलाई के सिकाएका छन कुन्नि । नानीहरु त्यो घेरा तोढेर बाहिर आइसके । मानिसको दुर्गति । हाम्रो आफनै देशमा पनि मानिसहरुको बिचल्लीहुने अवस्था आउन सक्दछ । राज्यले जव ५१ रुपैयाँ खर्चहुने ठाउँमा ५१ पैसा खर्चगर्न थाल्दछ त्यहींबाट शुरु भै हाल्दछ वगावत । लामो समयदेखि वगावतमा रहेको मधेशले आफनो वरिपरि काँडेतार लगाएर वाहिरी सीमाना बनाउन खोज्यो भने के हुन्छ ? सीके राउतले ।।।रुख’ र ।।।सूर्य’देशका दुवै प्रमुख चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लडे भने त्यो चुनाव हुन्छ कि जनमत संग्रह ? जीवनमा मानिसको सवैभन्दा ठूलो चाहना हो नवीनता । सत्तरी वर्षदेखि न गुईंठा छुटेको छ, न झोपडी फेरिएको छ, न खोकी वन्द भएको छ । कति कति बेला २०७२ वैशाख १२ र त्यसपछिका भुईंचालोले थर्काउँछन । मल्लकालीन राजा प्रतापमल्लले आफनो सन्तानको मृत्युले छटपटिएको रानीको दिल वहलाउन वनाइ दिएको रानी पोखरीमा पानी नभएको यो पहिलोपल्ट होला । त्यसको छेउमा उभिएको हात्ती, त्यसमाथि चढेका राजा प्रताप र उनको परिवार ।